Ngwunye ígwè na-agba ume nchara Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe
Home / ngwa / Mgbakasị na-esi ike / Induction Harding Steel Pipe Mkpa
Category: Mgbakasị na-esi ike Tags: zụta igwe na-agba ume, isi ike, hardening ọkpọkọ, ígwè siri ike, ebe siri ike, HF hardening igwe, HF hardening ọkpọkọ, mmechi mmebi, induction hardening ọkpọkọ, Ngwunye ígwè na-agba ume, induction elu hardening
Ngwunye nke na-eme ka ígwè sie ike dị elu
ebumnobi: Ọkụ na-eme ka ike gwụ a na-eji ya na usoro iji mee ka akụkụ ọkpọ ígwè sie ike iji melite nkwụsị-nkwụsị
ihe: Ngalaba ọkpọkọ ígwè: 1.6 "(40 mm) mpempe mpụga, 0.125" (3 mm) mgbidi 2 "(50 mm) ogologo
Okpomọkụ: 1832 ºF (1000 ºC)
Itinye n'ọkwa Heating Equipment: DW-UHF-30 kW, 100kHz induction usoro oku, nke nwere mpempe akwụkwọ dịpụrụ adịpụ nwere ihe anọ 2.0 μF capacitors maka ngụkọta nke 2 μF
- Otu induction kpo oku Ezubere ma mepụtara kpọmkwem maka ngwa a iji kpuchie eriri waya
Itinye n'ọkwa Heating Usoro: A na-eji eriri na-atụgharị agba agba agba okpukpu ise mee ka kpoo aka uwe nchara ahụ. A na-agbanwe oghere dị n'agbata eriri igwe iji nye okpomọkụ dị n'otu akụkụ nke ígwè. Akụkụ ahụ na-anyụ anyụ na 7% polymer quench na-eso usoro okpomọkụ iji nweta ike RC40.
Ọkụ na-egbuke egbuke Akụkọ: N'inwe obi nkoropụ na ọkwa dị ala na usoro a na-apụtaghị na mbụ, onye ahịa na-eji ntinye iji weta ọgwụgwọ ọkụ na njikwa nke njedebe ngwaahịa na ụlọ.
- kpoo ọkụ ozugbo n'ime akụkụ ahụ, chekwaa ike na oge
- njikwa akara nke kpo oku
- ọbụna nkesa nke kpo oku tinyere akụkụ ahụ
- ọnụego mmepụta ngwa ngwa & ịbawanye mmepụta
- usoro na-enweghị ire ọkụ